Si loo joogteeyo laastikada iyo midabka sida bikini-ga xagaaga soo socda, dayactirka maalinlaha ah ayaa aad muhiim u ah. Qodobbada soo socdaa waa qodobbada ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo si loo dayactiro maalinlaha. Si aad u dheereysato cimrigaaga boodhkaaga, waad raaci kartaa.
1.Qaabida dharka dabbaasha
Sababtoo ah dharka dabbaasha dabbaasha ayaa xiriir toos ah la leh maqaarka, waa inaad fiiro gaar ah yeelatid markaad dhaqeyso: heerkulka biyuhu waa inuusan ka badneyn 20 digrii, sababtoo ah dabeecadda gaarka ah ee dharka dharka dabaasha, heerkulka biyaha oo aad u sarreeya ayaa dhaawici doona dharka, kaas oo sababa gabowga oo lumiya baqa; ku dar kareem dhexdhexaad ah oo jilciya 10 dhaq gacmahaaga daqiiqado kadib. Ha isticmaalin budada dharka lagu dhaqo, biliijisada, iwm. Ka dib markaad maydho, ku qalaji hooska hana u fidin iftiinka qorraxda.
2.Waxaa la maqlayaa dabbaasha dabbaasha
Biyaha kiimikada iyo biyaha ku jira barkadda dabbaasha waxaa ku jira kiimikooyin, taas oo dhaawici doonta xargaha dabbaasha, sidaa darteed waa inaan xidhnaa maraq dabbaasha ka dibna aan isticmaalnaa kuleylka qorraxda. Ka dib markii aan dabaasho, waa inaan maydhno jirkeena ka dibna aan iska bixnaa. dabaasha. Kahor intaadan galin biyaha, ku maydh weelka dabbaasha biyo si aad u yareyso waxyeelada barkadda dabaasha ama badda. Wixii alaabooyin dheeri ah oo bikini ah, fadlan booqo bartayada internetka www.stamgon.com.
3. Kaydinta suufka dabbaasha
Ha u malayn inaad kaliya u baahan tahay inaad ku xidho dharkaaga dabbaasha dabbaasha barkinta. Xaqiiqdii, tani waa dhaawac weyn iyaga. Hawo-mareenka iyo hawo-mareenka waa in laga ilaaliyaa kiimikooyinka, sida is-qurxinta, saabuunta dharka lagu dhaqo, iwm., Si looga fogaado duugista dharka dabbaasha ama dharka dharka dabbaasha ee ay sababaan qorraxdu. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo sanduuqa kaydinta si loogu kaydiyo suuliga qubayska. Koobka iyo dharka qubeyska u kala dhig si gooni ah. Tani waxay ka hortegi kartaa koobka in la tuujiyo oo uu xumaado. Waxaa fiican inaad xoogaa hawo ku haysato oo aad ku qalajiso sanduuqa kaydinta.
Bikini ama dharka dabbaasha waxay leeyihiin dabacsanaan sarreysa. Si loo joogteeyo waxqabadka, waa in lagu keydiyaa kiimikooyinka, sida waxyaabaha la isku qurxiyo iyo dharka dharka lagu dhaqdo. Ka fogow iftiinka qorraxda oo kuu horseeda gabowga bayniska ama dharka dharka dabbaasha inta lagu keydinayo. Waxaa lagu talinayaa in sidoo kale la isticmaalo sanduuqa kaydinta si loogu kaydiyo dabaasha dabbaasha. Ha u oggolaanin in koobka bunni-ga la tuujiyo oo la hagaajiyo. Ka dhig mid qalalan oo qalaji. Xoogaa quusin ah waxaad dhigtaa sanduuqa kaydinta.
Waqtiga boostada: Apr-15-2020